Su'aalaha La Weydiiyo - Iris Beauty Co., Ltd.
J: Waxaan nahay soosaaris xirfad leh.
2.Q: Sideen ku heli karaa muunad si aan u hubiyo tayadaada?
J: Marka hore, nala soo socodsii shuruudahaaga ku saabsan alaabada, ka dib waxaan ku siin doonaa soo jeedin waafaqsan oo aan ku siin doonaa xigasho. Marka dhammaan faahfaahinta la xaqiijiyo waxay soo diri kartaa shay-baarka. Qiimaha muunadda ayaa la celin doonaa haddii amar la bixiyo.
3.Q: Miyaad aqbashaa OEM ODM oo ma noo sameyn kartaa naqshadeynta?
4.Q: Muddo intee le'eg ayaan filan karaa inaan tijaabada qaado?
5.Q: Ka waran waqtiga hogaaminta ee soosaarka tirada badan?
J: Si daacadnimo ah, waxay kuxirantahay tirada amarka iyo xilliga aad amarka siiso. Caadi ahaan waxay noqon doontaa 25 - 60 maalmood. Waxaan nahay warshad waxaan leenahay qulqulka badeecada oo xoogan, waxaan kuu soo jeedineynaa inaad bilowdo baaritaan labo bilood ka hor taariikhda aad jeclaan laheyd inaad alaabadaada ka hesho wadankaaga.
7.Q: Sidee nala soo xiriirtaa?
Waxaan halkaan u nimid inaan ku caawino --- fadlan xor ayaad noogu soo diri kartaa irisbecosmetics@gmail.com.